वडाध्यक्ष मल्लले आफ्नै खर्चमा जिम सेन्टर निर्माण – Radio Hatemalo FM
वडाध्यक्ष मल्लले आफ्नै खर्चमा जिम सेन्टर निर्माण
प्रकाशित मितिः २६ माघ २०७७, सोमबार १५:०६ February 8, 2021 हातेमालो संवाददाता
बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष सुमन मल्ल विकासमा निकै अग्रसर बढाउदै जानु भएको छ । उहाँले आसन र भाषणमा त्यति ध्यान नपु¥या पनि विकासका सबै पक्षमा काम गर्दै आउनु भएको छ ।
वडा अध्यक्ष मल्लले आफ्नो अधिकांश समय वडाको विकास र जनताको पिरमर्का बुझ्न् खर्च गर्ने उहाँको स्वभाव सहयोगी छ । उहाँले आफुले पाउने सेवा सुविधाबाट समाजिक काम र लक्षितवर्गमा खर्चिने गरि रहनु भएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ जयकिसान स्पोर्ट्स क्लबको भवन र त्यसमा जिम सेन्टर ।
मल्लले आफ्नो वडाका नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने उद्देश्यले जिम सेन्टर निर्माण गरेको अध्यक्ष मल्ल बताउँछन् । तत्कालीन मध्यपचिम खेलकुद विकास समितिबाट २ पटक गरि ५ लाख सहयोग हुँदा बाँकी सबै रकम वडाध्यक्ष मल्लले सहयोग गरेको सचिब चिरञ्जीवी पाण्डे बताउ भयो ।
उहाँलेमैटहवा माविसँगै रहेको जिम सेन्टरमा पुगेर खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति, वडा नं. २ का अध्यक्ष देवीलाल खनाल, कार्यपालिका सदस्य फत्तेकुमारी जैसी, बिज्ञ सदस्य किरण ढकाल, सञ्चारकर्मी जे पाण्डे लगायतले अवलोकन गर्नु भएको छ । जिम सेन्टरमा जिमका लागि आवश्यक सामाग्री समेत ल्याईसकिएको छ ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यको सपथ ग्रहण सम्पन्न
नेपालगन्जमा विद्यालय स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता हुने
खजुरामा जनतासँग स्थानीय सरकार अभियान सरु
बाँकेका पत्रकारलाई मंगलबारदेखी कोरोना खोप लगाईने